April 17, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 3
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Siciid Cabdullaahi Denni ayaa looga fadhiyaa magacaabista taliska ugu sareeya ciidamada Daraawiishta dowladda Puntland oo dhowaan warqadda iscasilaadda u gudbiyey xafiiskiisa.
Inkastoo ay muddo dheer ka soo wareegatey waqtigii uu xilka banneeyey taliyihii hore ee ciidanka Daraawiishta Puntland Sarreeye Gaas Cabdishukri haddana wararku waxa ay sheegayaan in todobaadyada soo socda la magacaabi doono.
Ilo xogagaal ah ayaa Puntlandnews u xaqiijiyey in madaxweyne Denni uu taliyaha guud ee ciidanka u magacaabi doono General Tuuta-weyn oo siweyn looga yaqaan deegaamada Puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay ciidamada qalabka sida.
Puntland ayaa dagaalo kula jirta ciidanka Somaliland ee ku sugan deegaamada Tukaraq iyo Yubbe ee ka kala tirsan gobolada Sool iyo Sanaag, waxaana ay sidoo kale ciidanku buuraleeyda gobolka Bari kula diriraan Daacish iyo Alshabaab.
c\_rashid carmale sanaag somalilaand says:
deni wixisu wa berka jcli xaydha jecli sawtu iri beluhu hays.difacen e dalku wa somalilne habar lag din wax uga fudud
Poqortoyo Wiil Shacab says:
Wan sodhayna magcabista dalirka cidamada waxan leyahay mudane Wellcom?
habarta wa kudhanta waxa tahay fuley carmale joga